Serivisy fitahirizana rahona (I): Box | Vaovao IPhone
Nanomboka andian-dahatsoratra vaovao izahay hadihadio ny serivisy fitehirizana rahona lehibe, ireo endri-javatra maimaim-poana, endri-javatra karama, fampiharana azo alaina ao amin'ny iOS, OS X, ary Windows, ary mifanentana amin'ny serivisy hafa. Hanomboka amin'ny Box izahay, serivisy misy tolotra maimaimpoana tena tsara izay miaraka amin'ny rindranasa ho an'ny sehatra rehetra.
1 10GB maimaim-poana ary 250MB isaky ny rakitra
2 Fampiharana cross-platform
3 Fangatahana fety fahatelo
10GB maimaim-poana ary 250MB isaky ny rakitra
Niova kely ny zavatra raha oharina amin'ny tamin'ny fotoana namoronako ny kaontiko maimaim-poana. Tamin'izany fotoana izany dia nanolotra 50GB maimaim-poana i Box, izay nahatonga azy io ho tolotra tsara indrindra tsy misy fisalasalana ny amin'ireo efa misy. Ankehitriny dia ambany kokoa ny tolotra: 10GB ihany, izay tsy ratsy mihitsy ary mieritreritra aho fa ho ampy ho an'ny ankamaroan'ny mpampiasa izany. Mazava ho azy, ny kaonty maimaim-poana dia manana fetra: ny fisie dia manohana hatramin'ny 250MB ihany, noho izany tsy safidy ho an'ireo izay mitady fomba fampidinana rakitra media toa ny sarimihetsika. Misy ny mety hanitarana ireo fetra ireo, miaraka amin'ny drafitra vidiny samihafa.
fitehirizana 10GB 100GB manam-petra manam-petra
Size / File 250MB 5GB 5GB 5GB
Fidirana finday Eny Eny Eny Eny
Fampiharana namboarina No No No Eny
Fiarovana finday No No No Eny
vidiny maimaim-poana € 8 / volana € 12 / volana manokana
Araka ny nolazaiko, ny fetra isaky ny fisie dia mety maneho a antony ampy tsy hijerena mivantana ity serivisy ity ho safidy iray, fa raha ny amiko, ampiasaiko amin'ny asako izany, izay toerana itahirizako ireo rakitra data (doc, ppt, pdf, sns) fotsiny dia ampy.
Tsy isalasalana fa ny iray amin'ireo lafiny manintona azy indrindra dia ny katalaogin'ny fampiharana lehibe ho an'ny karazana sehatra rehetra. Fampiharana ho an'ny iPad, iPhone, Android, Blackberry, Mac OS X, Windows, OS Web, sns. Ary tsy miresaka momba ny isan'ny fampiharana fotsiny isika fa momba ny kalitaony. Ny rindranasa Box ofisialy dia iray amin'ireo fanavaozana voalohany, manararaotra ny fanitarana iOS 8, izay ahafahanao mandefa ny firaketana izay tonga amin'ny alàlan'ny mailaka, ohatra, amin'ny kapila mafy ao anaty boaty vaovao.
Ny rindranasa ho an'ny iOS dia tsy mamela anao hitantana ny fisieo fotsiny fa afaka mahita azy ireo koa, miaraka amin'ny mifanentana amin'ireo endrika lehibe (Word, Excel, Powerpoint, PDF, sns.) Zarao ny rakitra miaraka amin'ny olon-kafa koa azo atao noho ny fampiharana ofisialy mampiasa fomba isan-karazany toy ny mailaka na amin'ny hafatra.
Ny fangatahana ho an'ny Mac OS X sy Windows, Box SyncNy zavatra ataony dia ny mamorona fampirimana amin'ny solo-sainanao (azo alamina) izay hampifanindriana ny fanovana rehetra ataonao amin'ny fitaovanao finday na solosainao ao anaty rahona. Fomba tsara hitazomana ny rakitrao ho tonga lafatra hatrany am-piasana, any an-trano, ary amin'ny findainao.
vao haingana Microsoft dia nanampy Box tamin'ny serivisy Office 365, ka raha mpampiasa an'ireto fampiharana ireto ianao dia hanana fidirana mivantana amin'ireo rakitrao Box avy amin'izy ireo, fa tsy mila mankany amin'ny mpikaroka rakitrao.
Ny serivisy dia manana fampiharana kalitao manokana dia teboka iray manandanja aminy, saingy izany ny fampiharana ny hafa koa mampifangaro ny serivisinao Izy io dia zavatra lalaovina manohana na manapa-kevitra ny hampiasa azy na tsia. Angamba tsy dia fantatra amin'ny anarana hoe Dropbox na Google Drive, Box dia misy ny fisian'ireo rindranasa marobe izay manararaotra ny asany. Toy izany ny tranga momba ny Documents, rindranasa Readdle maimaim-poana izay ahafahanao mijery, mandamina ary mizara atiny avy amin'ny serivisy fitehirizana an-tserasera lehibe, ao anatin'izany ny Box, na ny mpanjifa mailaka toa ny Acompli izay mamela anao hametaka ireo rakitra Box amin'ny mailakao. Ary ohatra vitsivitsy fotsiny amin'ireo rindranasa mampiditra azy ireo izy ireo, satria misy maro hafa ao amin'ny App Store.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Serivisy fitahirizana rahona (I): Box